हङकङलाई दिएको विशेष हैसियत अन्य गर्ने ट्रम्पको आदेशपछि चीनले दियो चेतावनी – Sandesh Munch
हङकङलाई दिएको विशेष हैसियत अन्य गर्ने ट्रम्पको आदेशपछि चीनले दियो चेतावनी
July 16, 2020 121
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङकङलाई दिएको विशेष हैसियत अन्य गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले चेतावनी दिएको छ। ट्रम्पले चीनविरुद्ध बढ्दो रुपमा कडा नीति अगाल्ने क्रममा उक्त आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
हङकङमा चीनको नयाँ सुरक्षा कानून जारी भएपछि ट्रम्पले उक्त कदम चालेको बीबीसीले जनाएको छ। तर चीनले भने उक्त कदमको कडा आलोचना गरेको छ। चीनले अमेरिकाको उक्त आदेश आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हतस्क्षेप भएको बताउँदै आफूले पनि जवाफी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको कदमको आलोचना गर्दै अमेरिकी नागरिक र संस्थालाई चीनमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। मन्त्रालयले वयान जारी गर्दै हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गर्न रोक्ने चीनको कोशिश सफल नहुने बताएको छ। यस्तै अमेरिकाले आफ्नो गल्ती नसुधारेमा चीनले पनि कडाईको साथ जवाफ दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टनमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा हङकङको स्वतन्त्रतालाई मेटाउने सबै व्यक्ति र निकायलाई त्यसप्रति जिम्मेवार ठहर्‍याइने बताएका थिए। “हङकङलाई अब मुख्यभूमि चीनजसरी नै व्यवहार गरिनेछ,” ह्वाइटहाउसमा पत्रकारहरूलाई उनले भने। ट्रम्पले हङकङमा मानव अधिकार हनन गर्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने एउटा विधयेकमा समेत हस्ताक्षर गरेको बताए।
Prevसन् २०२२ मा हुने कतार विश्वकपको मिति सार्वजनिक
Nextनेपालको कालापानीमा भारतले बढायो सुरक्षाकर्मी, नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई अवरोध
अब निन्द्रा नलागे, यस्ता घरेलु उपाय:-अपनाउनुहोस्जानी राखौ
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83198)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27044)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13098)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12340)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12009)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11754)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11272)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10100)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9674)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9566)
सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि भोलीको राशिफल पढ्नुहोस्…
गर्भवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कुन समय उपयुक्त ?